တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: February 2014
ဒီနေ့ရဲ့ နေဝန်းကြီးဟာ ကွယ်သွားပြန်ပြီ ညရဲ့ အမှောင်အောက်မှာ အလင်းရောင်
ဖန်ချောင်းလေးကို ထွန်းညှိပြီး အနီးနားရှိတဲ့ မှတ်စု စာအုပ်ကို လှမ်းယူကာ နေ့လည်က
စဉ်းစားမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို စတင် ရေးဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ
အကြောင်းကတော့ တခြား မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလဲ လောကဓံ ဆိုတဲ့ အကြောင်း
ကို ရေးသားလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.....။
လောကကြီးမှာ နေထိုင်ရသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နေထိုင်ကြသလို အသိုင်း
အဝိုင်းနှင့် နေထိုင်ကြသည်မှာ လောကဓမ္မတာပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့က ကိုယ်
ကျင်လည်သည့် အလုပ်အကိုင်နှင့် အသိုင်းအဝိုင်းမှာပင် မဖြစ်မနေ တွေ့ကြုံရမည့်
လက်တွေ့ကျတာနှင့် လက်တွေ့မကျ တဆင့် ကြား၍ သိရသော အကြောင်းအရာ
များလည်း ရှိကြမည်မှာ တကယ်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့က ကြိုးစား ရုန်းကန်နေမှု၊ အလုပ်ကို
အားစိုက်နေခိုက် အလုပ်နှင့် မတန်အောင် ဖိအားတွေနှင့် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေရတာလည်း
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:46 PM No comments:
Labels: မူလစာမျက်နှာ, အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါး, အဆိုအမိန့်, ဆောင်းပါး
ပိဋကသုံးပုံ သရုပ်စုံအဘိဓာန် ဒုတိယပိုင်း မာတိကာ
လေးဖြူရဲ့ ကမ္ဘာမြေအောက် (ပါဠိversion)
ILO ရာပွညျ့အထိမျးအမှတျ ဆုရသူမြားဆုခြီးမွှငျ့မညျ့နရေ့ကျထုတျပွနျ
အမှောင်ခွင်းသော ညရဲ့ လမင်း
အမှောင်ခွင်းသော ညရဲ့ လမင်း ဝေဒနာ ကကြိုးဆင်းနေတဲ့ ညနေခင်းမှာ... ဘဝငှက်တွေ အိပ်တန်းပျံနေပါရဲ့... တစ်ကိုယ်လု...
သူ့....အသက် လေးဆဲ့ရှစ် ရောက် နေရာမှာ ကိုယ်ပိုင်လို့ မသတ်မှတ်ခဲ့ စနစ်ကျတဲ့ နည်းနာတွေ နူးညံ့စွာ သက်သေထူလို့ စွမ်းအင်ပကားတွေက ရွှေရတုနှစ်သ...
သံဝေဂ ဆည်းဆာ ဘဝနိကန္တိက အစဖြာရင်း ပဋိသန္ဓေ ဂဗ္ဘ အမိ ဝမ်းတွင်းက ကိုးလ လွယ် ဆယ်လ ဖွားလို့ ဇာတိ လှောင်အိမ်ထဲက ထွက်ခဲ့သူ.. အချို့...
လူတိုင်းရင်မှာ မင်္ဂလာ နံနက်ခင်း အာရုဏ်ဦး အလင်းတတ်လာတဲ့ ရောင်နီဦး အညွန့်လေးကို ငေးကြည့်ရင်း တေးငှက်လေးများ တွန်းကျူးသံကို သာသာယာယာ ...
Change from love to lovingkindness
Love can suffer asawind, We cannot see the air pollution of love. We can feel at all. But we cannot pass any att...
A Long The Cycle of Samsara
A Long The Cycle of Samsara At the beginning life is startedaJourney, Searching for something, We cannot d...
တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း၏ အကောင်းဆုံးဆုရ ကဗျာ
ဝင်္ကပါများသော လျှိုဝှက်ချက် အသိုင်းဝိုင်းက အသိဥာဏ်မဲ့ အတွေးခေါင် လွင်ပြင်ကျယ်ထဲက လူ့ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို သင်္ချာတွတ်မိတော့ အစားထိုးတဲ့ ထပ်...
လပြည့်နယုန် ငြိမ်းချမ်းရေးဂုဏ် ဒီနေ့ဟာ (Great Occasion and Great Noble Day) နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ (The Full_Moon Day Of Na...